Arc-jiro Mandroso Head
LED Ny hafa
MIARA LOHA LIGHT
ivelan'ny trano LIGHT
Tantera-drano Par LED
G uangzhou Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co., Ltd, izahay iray amin'ireo matihanina orinasa mpamokatra entana, sy nivarotra orinasa ny sehatra jiro. Ny Company dia naorina teo an 1992, ary ankehitriny dia manana 18 taona traikefa.
Team Sava lalana
Orinasa tsy manana fitaovana famokarana mandroso, fa koa maro avo-tsara, ny teknolojia avo, matihanina injeniera sy ny fanatsarana ny matihanina sy ara-teknika manokana, maro ny mazoto, ny firaisan-kina tsara tehina. Company laza eo amin'ny tsipika, teknolojia vaovao hevitra, ary tsy tapaka mamorona vokatra avo lenta izay manatsara ny fototra fifaninanana ny orinasa. Tamin'ny taona 2003 ny orinasa nandalo 09001: 2000 taratasy fanamarinana kalitao iraisam-pirenena, ary nahazo "taona", "CCC" fanamarinana.
Aiweidys 'nalaza aloha, tsara aloha, fanavaozana aloha, voalohany fanompoana "fomba fiasa, ny fanahin' ny olona -oriented, fanavaozana teknolojika ary ny fampandrosoana maharitra" raharaha filozofia, tahaka ny amin'ny mandrakariva, dia manome ny mpanjifa amin'ny faran'izay tsara mahomby indrindra vokatra sy ny tolotra izay avy any ivelany mpanjifa miverina any antsika ny fanampiana sy ny fitiavana.
G uangzhong Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co, Ltd, dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra sy ny fanompoana ny matihanina jiro sy ny feo teo amin'ny kianja filalaovana ny avo-teknolojia orinasa Company Faritany Baiyun District de Guangzhou City, nanarona 15 Acra, fanorenana faritra ny 25000 M ^ 2. Garden zavamaniry, haingo ny loharano ao anaty dobo. 700 M ^ 2 orinasa amin'ny manan-tsaina multi-Functional Studio, mihoatra ny 1,000 metatra tora-droa ny birao maoderina toerana. Taorian'ny 20 taona ny fampandrosoana, ny orinasa lasa tena orinasa goavana Product tanàna manerana ny firenena naondrana rehetra manerana izao tontolo izao, ary ao an-toerana sy avy any ivelany dia samy mpanjifa.
Guangzhou Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co., Ltd, izahay iray amin'ireo matihanina orinasa mpamokatra entana, sy nivarotra orinasa ny sehatra jiro. Ny Company dia naorina teo an 1992, ary ankehitriny dia manana 18 taona traikefa. Efa nandray ny rafitra fitantanana ny solosaina tambajotra, sy ny rafitra fitantanana ny kalitao mifanaraka tsara ISO9001: 2000 fepetra ho an'ny famokarana. Ny vokatra efa certificated amin'ny "CCC" sy ny "taona" sy ny "RoHs".
Aiweidy entana manana laza tsara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, indrindra noho ny fihetsehan'ny lohany jiro, jiro LED jiro sy ny ivelan'ny trano. Ankehitriny, ny vokatra dia naondrana any Eoropa, Azia Atsimo, Moyen-Orient, Amerika Avaratra sy Atsimo ary ny hafa firenena sy ny faritra. Mijery mialoha, ny mpiara-miasa rehetra Aiweidy mitantana ny pinoany ny kalitaon'ny aloha, asa fanompoana voalohany, fanavaozana ny voalohany na ny fitokisana aloha tahaka ny amin'ny mandrakariva ny hanompo mpanjifa sy ny namany avy ao an-trano sy any ivelany.
Address: 2 / F, No. 3, 5 Xinghe Atsimo Road, 1 Industrial Area, Taihe, Baiyun Dist., Guangzhou, Guangdong, Sina (Tanibe)